လက်စွဲထွင်းထုခြေလှမ်းများကဘာတွေလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / လက်စွဲထွင်းထုခြေလှမ်းများကဘာတွေလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-06-05 မူလ:ဆိုက်ကို
သစ်သားထွင်းထုခြင်းသည်မကြာခဏခေါ်လေ့ရှိသောပန်းပုဖြစ်သည်‘ရိုးရာလက်မှုပညာ’တရုတ်ပြည်မှာ သစ်သားပန်းပုကိုသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်,သုံးဖက်မြင်ညွန့်ပတ်ပတ်လည်ထွင်းထု, အမြစ်ထွင်းထုခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း။ ၎င်းသည် Woodworking မှကွဲကွာနေသောအလုပ်မျိုးဖြစ်သည်‘Woodworking’အလုပ်၏ခွဲခြား၌တည်၏။ သစ်သားထွင်းထုသူများသည်လက်စွဲထွင်းထုခြေလှမ်းများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ Wod ပန်းပုပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်ပန်းပုဓား,သစ်သားပန်းပုရုပ်စက်ကိရိယာများ,သစ်သား polishing စက်စသည်တို့ကိုစသည်တို့.
W အတွက်ဖန်တီးရန်နည်းလမ်းမရှိပါWood, ဒါကြောင့် dehumiditiation ကိုအရင်လုပ်သင့်သည်။ လေထုခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်သမားရိုးကျအခန်းခြောက်သွေ့မှုနှစ်ခုလုံးသည်ရိုးရာသစ်သားခြောက်သွေ့ခြင်းနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သမားရိုးကျခြောက်သွေ့ခြင်းဟုစုပေါင်းရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင် dehumidification ခြောက်သွေ့ခြင်း, ဖရမ်ခြောက်သွေ့ခြင်း, မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြောက်သွေ့သောနည်းလမ်းများရှိသည်။ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များနဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။
ရွေးချယ်ထားသောသစ်သားပိတ်ဆို့ခြင်း, ပုံစံသို့မဟုတ်ပုံသဏ္ detrad ာရေးကို detai ၏လိုအပ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ပြီးနောက်ဌဖြစ်သင့်သည်ဆဲွငင်nအဲဒါပေါ်မှာတစ် ဦး ကလောင်နှင့်အတူ။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်လိုင်းများကွဲပြားခြားနားသောရာထူးနှင့်အဆင့်ဆင့်မှာပုံစံများကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ ှုွမည်သောငလှော်ပုံစံများလိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Rအဆိုပါဓါး Mark နှင့် Chisel အမှတ်အသား erairနှင့်အတူအလွတ်ဒဏ်ငွေကောင်းမွန်သောထွင်းထုပြီးပါးလွှာသောဓား၏နည်းလမ်း,အရာစေသည်ကောင်းသောအလုပ်၏မျက်နှာပြင်ဒဏ်ငွေနှင့်စုံလင်သော။ ဒီအဆင့်မှာအလုပ်ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်နဲ့လိုင်းတွေရှင်းလာတယ်။ ထို့ကြောင့်ဓားပြလုပ်ငန်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိကျစွာပြသရန်ဓားခြေရာခံသည်နှင့်ဓားခြေရာများသည်ရှင်းလင်းပြီးဒဏ်ငွေဖြစ်သင့်သည်။
ကြိတ်ဂရုတစိုက်နှင့် လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာများ aမှ ccordingလိုအပ်ချက်အလုပ်၏ s.ကြိတ်စက်များပါဝင်သည်အိမ်အတွက်စက်ပြင်စက်,ကြိတ်စက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း,Rotary Grinderစသည်တို့ကိုစသည်တို့
ခဲယဉ်းသောစုတ်တံ, သေးငယ်သောခဲတံနှင့်အရောင်ရောနှောထားသောအိုးတလုံးကိုပြင်ဆင်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းဖြစ်သင့်Gouache, ပန်းချီသို့မဟုတ်ဖိနပ်ဆီကဲ့သို့သောရေနှင့်ပျော်ဝင်မှု။ သူတို့ကသေးငယ်တဲ့လွှမ်းခြုံနှင့်ခိုင်မာတဲ့ permeability အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ ရေနံပန်းချီတွင် acrylic ဆေးသုတ်ခြင်းသည် ဦး အတွက်မသင့်တော်ပါဝင်ခြင်း.
WoodCarving Coloring ၏အဓိကနည်းလမ်းမှာသစ်သားနှင့်ပုံစံကိုကျွမ်းကျင်ရန်ဖြစ်သည်, ၎င်းသည်ခြယ်ပစ္စည်း၏အဖုံးအောက်တွင်ရှိနေသေးသည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်ကျယ်ပြန့်edကောင်းသည့်နှင့်သိပ်ထူထပ်လွန်း အရောင်၏ဖြန့်ကျက်၌တည်၏။ ခြယ်ပစ္စည်းအချိုးအစားမှာ 30: 1 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပါးလွှာပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နေသည့်တိုင်သစ်သားကိုဖုံးအုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ brush ဘောပင်၏ရေပါဝင်မှုသည်သိပ်မများသင့်ပါနှင့် do အောင်မြင်မှုအတွက်အလျင်စလိုမဟုတ်ရင်အရောင်အစစ်ခံတွင်နက်ရှိုင်းသောခွက်သည်မညီမညာဖြစ်နေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
ပြုလုပ် not ကိုအရောင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းသစ်သားအရောင်တင်ပါ။ ခြောက်သွေ့သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်သေချာပါစေ (12 နာရီအကြာတွင်). W၎င်းကိုစင်ကြယ်သောအထည်နှင့်အတူစင်ကြယ်သောအထည်ဖြင့်၎င်းနှင့်ချောမွေ့သောခံစားမှုမရှိသေးပါ။ တချို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ချန်လှပ်အခြေအနေအရသစ်သား၏နောက်ခံအရောင်ကိုအနည်းငယ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးအရောင်အလွန်ကြွယ်ဝသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ထို့အပြင်အကျင့်ကိုကျင့်၏အဆင့်ဆင့်၏သဘောကိုခိုင်ခံ့။
လူအတော်များများကစဉ်းစားကြတယ်ဟုသစ်သားထွင်းထုတတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲရမည်။ တကယ်တော့ဒါကအရမ်းခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ နေသမျှကာလပတ်လုံးနည်းလမ်းအဖြစ်သင်ယူသည်ကြွင်းသောအရာသည်ပိုမိုလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်သည် ပြီးတော့အလုပ်ကသဘာဝကျကျပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။
သစ်သားပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ ပန်းပုဓား သစ်သားပန်းပုရုပ်စက်ကိရိယာများ သစ်သား polishing စက် လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာများ အိမ်အတွက်စက်ပြင်စက် ကြိတ်စက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း Rotary Grinder tool ကို DIY ပန်းပုကိရိယာများ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ